[Thursday, March 1st, 18] :: Soomaalida Denmark oo cambaareeyay Muuqaal uu baahiyey TV2
Odense (RH) Soomaalida ku nool dalka Denmark ayaa ka carooday warbixin uu baahiyey Telefishanka labaad ee dlakaas, taasoo lagu soo bandhigay haweeney muddo 19 sanno ku nooleed dalkaas oo aan baran luuqadda Daanishka isla markaana shaqo helin.
Warbixinta ayaa laga diyaariyey kulan ay lahaayeen haweenka Soomaaliyeed ee ku nool degmada Odense ee waddanka Denmark.
Warbixintan ayaa dhalisey hadalhayn badan oo ay qayb ka noqdeen siyaasiyiinta dalkaasi oo uu Raysal Wasaaruhu ka mid yahay ka hadlay.
Sahra Maxamuud Cali oo loo yaqaanno Sahra Suusaana waxa ay Denmar deggan tahay muddo yer marka loo eego Jaaliyadda Soomaalida, Sahra oo dhawaan loo doortay guddiga isdhexgalka bulshada ayaa VOA u sheegtay in arrintan ay tahay mid lagu dhaawacayo Soomaalida ku nool Denmark.
Waxay sheegtay in Soomaali badan oo aqoon leh oo xitaa macallimiin ka ah dalka Denmark la heli karo sido kale kuwa shaqeeya oo xilal ka haya dowladda.
Sahra ayaa sheegtay in ay xaqiiq tahay ruuxa aan wax soo baran haddana heesta carruur in ay ku adkaan karto luuqadda Deenishka oo ah mid adag.
TV2 ayaa su’aalo weydiiyey haweenka qaar ee kulanka ku sugnaa, hasa ahaatee ay jawaabtoodi noqotey mid ka mid ah sheekooyinki qabsadey warbaahinta dalkaas maalmahaan.
Maxaa run ka ah warbixinta?
Akhristow waxaa xaqiiq ah in la qabsiga iyo soo galootiga reer galbeedka waxa ay sannadihii ugu dambeeyay ahaayeen kuwa laga dhex arko ololaha siyaasadda ee siyaasiyiinta midig ay ku doonayeen kasbashada shacabkooda ka gadoodsan isbaddalka siyaasadeed iyo kan amni ee dunidda ku soo kordhay iyo warbaahinta dhinacaas u janjeera oo arrimahaas buun-buuniya.
Mahad Bashiir Yuusuf waxa uu Denmark tagay isagoo da’ yer balse labo bilood ka hor ayaa loo doortay guddiga deeganka magaalada labaad ee ugu weyn dalkaas.
Waxa uu sheegay in qof kasta oo taga waddan ku cusub in ay mas’uuliyad ka saaran tahay in uu barto afka waddanka uu tagay looga hadlo.
Mahad ayaa sheegay in muuqaalkaas uu ahaa mid nasiib darro ah maadama uu muujinayo muuqaal aan sax ahayn, isla Sahra Suusaana ayaa la qabtay fikirkaas.
Si kastaba, waxaa soo badnayey waayahan dambe waxaa soo noqnoqonayay hadalheynta Soomaalida qurbaha ku nool iyo la qabsi la’aanta waddamada iyo bulashada ay ku biireen.
Waqooyiga Mareykanka iyo Yurub waxaa soo noqnoqday dhaliilaha loo jeedinayo Soomaalida gaar ahaan burburka qoyska, dhallinyarada is leyneysa iyo ugu dambeyn luuqaha waddamada qaar oo aan la baran, balse waxaa sheegis mudan in ay jiraan qaar badan oo ka soo dhalaalay wixii laga sugayey iyo waqtiga ay joogeen dalalkaas iyo ka badanba.
posted on Thursday, March 1st, 18